दीपाश्री निरौलाको यस्तो खुलासा म अविवाहित हुँ, यौ न आनन्द पनि लिइरहेकी छु, तर कसरी ? – Classic Khabar
दीपाश्री निरौलाको यस्तो खुलासा म अविवाहित हुँ, यौ न आनन्द पनि लिइरहेकी छु, तर कसरी ?
May 16, 2021 124
अभिनेत्री एवम् फिल्म निर्देशक दीपाश्री निरौलाले आफू अविवाहित भएपनि यौ न आनन्द लिइरहेको बताएकी छिन् । उनले यौ न आनन्द लिनबाट आफू पछाडि नरहेको बताइन् । पत्रकार ऋषि धमलासँग ‘जनता जान्न चाहन्छन्’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रममा दीपाले विभिन्न साधनमार्फत यौ न आनन्द लिइरहेको बताइन् ।
‘अहिलेको वैज्ञानिक युगमा यौ न आनन्द लिन समस्या छैन । मैले पनि विभिन्न साधनमार्फत यौ न आनन्द लिएको छु’, उनले भनेकी छिन्, ‘से क्स गर्न विवाह नै हुनु पर्दैन ।’तपाईको विवाह दीपक गिरीसँग कहिले हुन्छ भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा अभिनेत्री दीपाले भनिन्, ‘मेरो विवाह नै हुँदैन । दीपकसँग विवाह हुँदैन ।’
दीपाले समाजले दियो भने दीपक गिरीसँग आफ्नो विवाह हुने बताइन् । ‘कानून र समाजले गर्दा दीपक गिरीसँग मेरो विवाह हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘समाजले दियो भने मात्रै दीपकसँग विवाह हुन्छ ।’निर्देशक दीपाले छक्का पञ्जा फिल्मको सिक्वेल अब नबनाउने बताइन् ।
‘छक्का पञ्जाको सिक्वेल नबनाउने भनेर सोँच बनाएका छौँ’, उनले भनिन्, ‘हाम्रो टिममा सल्लाह हुँदै छ ।’राजनीति प्रवेशका बारेमा पनि दीपाले प्रस्ट पारेकी छिन् । ‘म जीवनमा राजनीति गर्दैन’, उनले भनिन्, ‘राजनीतिमा जाने मेरो कुनै सोँच छैन ।’ तपाई कम्युनिस्ट हो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनिन्, ‘म कुनै पनि पार्टीको होइन ।’
Prevअमेरिकामा प्रेमीसंग कोठामा रंगे हात यस्तो अवस्थामा पक्राउ परेपछि भारत फर्किन प्रियंका
Nextमैले देशको संकट हल गर्न व्यक्ति ओलीलाई हैन प्रधानमन्त्रीलाई ओलीलाई भेटको हुँ : भट्टराई
युबक ले युबतिलाई २० दिन विवाह गर्छु भनेर भगाए अनि हाम्रो जात मिल्दैन भनेपछी युबतिको बिजोक
मन्त्रीले नै गुहार मागेपछि सामाजिक संजालमा भाइरल